Dekada Muqdisho shaqaale kasta oo la ruqseeyo lagu bedelo Turkish + Sawiro |
Dekada Muqdisho shaqaale kasta oo la ruqseeyo lagu bedelo Turkish + Sawiro
Wareegto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Shiikh Max’uud (dabayaaqada sannadkii hore) waxaa Dekada weyn ee Muqdisho lagu wareejiyey Shirkada Albayrak oo ah shirkad Turki gaar loo leeyahay, waxaana shirkadaasi markii xilka ay la wareegtay ay ruqseeysay inta badan xamaaligii Dekadda Muqdisho ka howlgalayey muddo ka badan 30 sanno & shaqaalihii qeybo badan oo Dekadda ah; waxaa shaqaalahaasi qaar ka mid ah ay ahaayeen kuwa adimadooda ku waayey intii ay shaqadaasi ku jireen.
Shaqaalaha inta soo hartay waxaa la hoos geeyey Shirkadda AK Party, iyadoo shirkaasina ay shaqaalaha ku soo xulato qaab ku dhisan beelnimo, sida ay sheegeen xubno ka shaqeeya Dekada.
AK Party waa shirkad ceynkee ah.?
Shirkada AK PARTY waxaa saamigeeda wada leh ganacsato ay isku reer hoose yihiin Madaxweynaha DF Soomaaliya Xassan Shiikh Max’uud, iyada oo Madaxweynaha laftigiisu uu ka mid yahay saamileyda shirkada, waxaana shirkada AK Party ay ku soo baxday qaab musuq-maasuq ah kaddib markii shirkadihii kale ee fududeeyey in Dekadu ay dib u howlgasho loo diiday in ay noqdaan shirkada keliya ee Sooomaali ah ee Dekada ka howlgaleysa, qaabka ay ku soo baxday shirkada AK Party waxaa ka taagan su’aal.
Qaar ka mid ah shaqaalaha Dekada oo diiday in magacyadooda la xuso; iyaga oo ammaankooda u cabsanaya ayaa si toos ah uga cabanaya dhibaatada ay kala kulmayaan Dekada Muqdisho, waxaana ay codsadeen in codkooda kor loo qaado, lana gaarsiiyo gudaha & dibedda.
“Dekada Muqdisho waxaa hadda ka socda waxaa lagu tilmaami karaa cadaalad darro uruurtay oo qarka u saaran in ay qaraxdo; waxaa lagu talo-xumeystay shaqaalihii muruq-maalka Dekada oo laga soo reebay in yar oo kooban, xittaa waxaa laga xishoon waayey gabdhihii Soomaaliyeed ee haystay caruurta agoonta ah ee ka shaqeynayey qeybaha kala duwan ee Dekada, waxaana shaqaale kasta oo la ruqseynayo lagu bedelayaa qof Turki ah oo laga keenay dalka Turkiga” Ayuu yiri mid ka mid ah shaqaalaha Dekada, wuxuuna intaa ku daray in dalalka adduunka ay jireen dal iyada oo dhibaato weyn ku habsatay loo soo gurmaday, haddii dalka soo gurmaday uu dalkii maalgashi ku sameeyo waxa uu dawgu yahay in isna uuu faa’iido helo, dadkii dalka u dhashayna ka faa’ideystaan fursadihii ay abuureen; balse Turkigu wixii uu Soomaalida u qabtay badelkeedii waxa ay noqdeen in wax walba uu isagu qaato; Soomaalidiina uu wax yar oo dufan leh afka u mariyo.
“Waa sax Turkigu waa dal walaal ah oo inoo soo gurmaday, taas macnaheeduse ma ahan in iyada oo dadkeenii ay baahan yihiin oo shaqo la’aan baahsani ay dalkii ka jirto in fursadihii shaqo ee laga helay dalka intooda badan ay qaateen Turkida. Madaxweynaha waxaan ka codsaneynaa in uusan cuqubo ka shaqeysan kumanaanka kun ee danyarta Soomaaliyeed ah ee noloshoodu ku xirneyd wixii ay ka soo xoogsadaan Dekada in maalin kasta mid dhabarka laga taabto oo la yiraa iska bax, laguna bedelo qof Turki ah. Madaxweynuhu waxa uu mas’uul ka yahay laga billaabo caruurtiisa ilaa caruur kasta oo Soomaaliyeeed “Madaxweyne haddii caruurtaadu aad guryo dhalo ka sameysan uga dhistay Stanbul, waa ayaan darro in caruurtii kale ee nolol maalmeedka ka helayey Dekada inaad ogolaatid in waalidintooda shaqada laga joojiyo” Ayuu yiri shaqaale ka mid ah Dekada oo maalintii 3-aad laga bannaanka ka jooga shaqadiisa markii lagu bedelay nin laga keenay Turkiga.
Dhinaca kale, waxaa jira shaqsiyaad Soomaali ah, oo laftigooda ictiqaadsan, in Turkiga loo gacan baneeyo inuu maamulo qeybo ka mid ah hay’adaha dowladeed ee halbowlaha u ah wax soo saarka dhaqaalaha; waxaana dadkaasi ay qabaan in ay waajib tahay in fursadaha shaqo ee laga abuurayo dalka in mudnaanta 1-aad, 2-aad & tan 3-aad-ba ay leeyihiin dadka Soomaalida ah, ayna tahay in iyagu marka hore ay ka intifaacaan.
“Waxaa ka faaideystay fursadihii shaqo ee Dekada shirkada Albeyrakh, waxaa taas la mid ah shirkada Vagori ee dhiseysa Garoonka Dayuuradaha Aadan Cadde shaqaalaheeda marka dhowr qofood laga soo tago (90%) waa Turki, shirkada kale ee & Nail Organization waxaa lagu wareejiyey (Ex. Dugsigii sare ee Banaadir) waxey ka dhigeen Isbitaal gaar loo leeyahay; dhammaan shirkadaha Turkiga ee dalka ka howlgala shirkad kasta waxaa la siiyey 40 sanno oo qandaraas ah in wixii ka soo baxa wax yar ma ahane in ay iyadu leedahay war dalkeen & dadkaan ma jirto miyaa cid u damqaneysa.?” Ayuu yiri howl-wadeen hore oo isna ka mid ah dadka ka cabanaya cadaalad darrada Dekada oo booskiisii lagu bedelay gabar Turki ah.
Apcalis SX Oral Jelly no rx, buy clomid online.